Ezona zi-8 zilungele inkunkuma kunye neefayile zokubuyisa iifayile ze-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isoftware ephezulu ye-8 yeNkunkuma kunye neFayile yokuBuyisa i-Android
UAron Rivas | 24/04/2021 06:30 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Yonke imihla sihlala sicela ukucima izinto ezininzi kwiifowuni zethu ze-Android, kunye nezinto esizicima kakhulu zonke yimifanekiso neefoto. Ngaba akwenzekanga kuwe ukuba ngempazamo ususe enye okanye ezingaphezulu ozithandayo, ezinjengezo foto uzithathileyo ngobo busuku bukhethekileyo okanye nabahlobo bakho obungakhange ububone ixesha elide? Ewe, oku Kukho inkunkuma kunye neefayile zokubuyisa iifayile esizokucebisa ngeli xesha.
Inkunkuma kunye nezicelo zokubuyisela kwifayile oza kuzifumana kule ingqokelela ziphakathi kwezona zi-8 zibalaseleyo ezikhoyo ngoku kwiVenkile yokuDlala. Ngabo uya kuba nakho ukulawula nokubuyisa iifoto kunye nemifanekiso, kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela; ezinye ziya kukuvumela ukuba ubuyisele iifayile ezinje ngee-audios, amaxwebhu kunye neevidiyo.
Kuluhlu esilubonisa apha ngezantsi, uya kufumana Usetyenziso oluPhezulu olu-8 lweNkunkuma kunye neFayile yokuBuyisa i-Android, njengoko besitshilo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba Zonke zisimahla kwaye zithandwa kakhulu, kunye nokulinganisa okuhle kunye nokukhuphela okuninzi okuxhasa ukusebenza kwayo ngokugqwesileyo. Ewe kunjalo, abanye banokubonisa amanqaku ongezelelweyo aphambili kunye naphambili anokufikelelwa kuphela xa kwenziwe intlawulo yangaphakathi.
1 Buyisa imifanekiso ecinyiweyo
2 Indawo yokulahla inkunkuma kwakhona kweBin
3 Phinda ubuye ususe iiFoto kwiFowuni: Ukubuyiswa kweDatha
4 Ukubuyiselwa kwePhoto
5 Isicelo sokubuyisela ifoto, ukubuyisela kwakhona
6 Ukubuyiselwa kwakhona kweScreen- iDiski enzulu eDischer
7 Phinda ubuye ususe iiFoto
8 Ukubuyiselwa kweVidiyo
Buyisa imifanekiso ecinyiweyo
Ukuqala ukudityaniswa kunyawo lwasekunene, sinokufumana kwakhona iMifanekiso esusiweyo, usetyenziso oluthi ikuvumela ukuba ufikelele ngokulula kwiifayile ezicinyiweyo, iifoto kunye neevidiyo zokufumana kwakhona kamva.
Kuya kufuneka uyinike iimvume eziyimfuneko zolu setyenziso zokufikelela kwimemori yangaphakathi ye-smartphone kunye nekhadi le-MicroSD ukukhangela iifayile, iifoto kunye nevidiyo ozicime ngempazamo. Ngale nto, unokufikelela kwaye uzibuyisele ngokukhawuleza, ngaphandle kwengxaki. Linda nje ukuba lwenze isoftware eshukumayo kwaye ufumane zonke ezazicinyiwe ngaphambili (Oku kungathatha ixesha, kuxhomekeke kubungakanani beefayile ezisusiweyo kunye nenani leefayile).
Kulula ukuyisebenzisa. Xa ukuskena kugqityiwe, iifolda ezininzi ezineefayile ezisusiweyo ziya kubonakala. Apho kuya kufuneka ukhethe ezo ufuna ukuzibuyisela kwaye ezi ziya kuvela kwiindawo eziza kuboniswa kwisicelo. Iifomati zomfanekiso kunye neefoto ezixhaswe ukubuyisa zezona zixhaphakileyo kwaye zisetyenzisiweyo, jpg, jpeg kunye png.
Indawo yokulahla inkunkuma kwakhona kweBin
I-Dumpster Recycle Bin, yenye yezonaapps ziluncedo kakhulu onokuba nazo kwi-smartphone yakho ye-Android namhlanje, izandla phantsi, kodwa ayisiyontengiso.
Ukuba ungomnye wabo basebenzise ngengozi iifoto, imifanekiso kunye nezinye iintlobo zeefayile ezinjengeevidiyo, esi sicelo siza kusebenza njengomsindisi wobomi ngaphezulu kwesihlandlo esinye, kuba igcina yonke into oyicime ngempazamo kwaye uyibuyise ngokulula nangokukhawuleza, ngaphandle kokungaphezulu. Ikwagcina iinguqulelo ezindala zeapps, enomdla, ngakumbi ukuba inguqulelo enye entsha ayisebenzi ngokuchanekileyo.
Ukuba ufuna ukugcina ilifu, esi sicelo sikunika ngexabiso eliphantsi kakhulu. Apho ungagcina yonke into oyifunayo ngokukhuselekileyo kwaye ngaphandle kwentengiso, kuya kufuneka uthintele. Ukongeza, usetyenziso lufumaneka ngeelwimi ezili-14, kubandakanya iSpanish nesiNgesi.
Phinda ubuye ususe iiFoto kwiFowuni: Ukubuyiswa kweDatha
Kwenzekile ngaphezulu komnye kuthi, ngelixa sizama ukucoca imemori yangaphakathi yefowuni yethu kwaye sicime iifayile, imifanekiso, iividiyo kunye nee audios esingasazifuniyo, into engaphezulu kwesinye icinywe ngempazamo. Ukuba sinethamsanqa, siyaqonda kwangoko, kwaye ukulungisa isenzo kukuba le app yenziwe, ukubuyisela zonke ezo zinto besingafuni ukuzicima okanye, kwezinye iimeko, siyasusa kodwa sifuna ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Iifayile ezinje ngamaxwebhu, imifanekiso, iividiyo kunye nee audios ezinokufunyanwa ngesixhobo ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kweengxaki ezininzi. Kusebenza kakhuluElona candelo lililo kukuba awuyidingi i-smartphone yakho ye-Android ukuba ibekiwe, into ethile eluhlobo lwayo lwenzayo.
Omnye umsebenzi onale app kukuba ikuvumela ukuba ujonge iifayile ezicinyiweyo kwaye uzicime ngokusisigxina, ukunceda ukukhulula ngaphezulu kwendawo yokugcina yangaphakathi yeselfowuni, enokuthi inyuse umda.
Esi sixhobo sikwabonelela ngokusebenza kwelifu. Unokwenza i-backup ngayo ekuvumela ukuba ugcine ngokukhuselekileyo nangokuqinisekileyo iifayile zakho ezibaluleke kakhulu, ezinjengeefoto, iividiyo kunye nokunye. Enye into ebonelelwa sesi sixhobo kukubuyiselwa kweefoto kunye neevidiyo ngeWhatsApp, umsebenzi oluncedo kakhulu kuba sithetha nge-app esetyenziswayo kunye nesithandwa kakhulu yokuthumela imiyalezo kwihlabathi liphela.
Umthuthukisi: Thepha kwiiNkqubo
Ukuba ujonge inkunkuma echanekileyo kunye neefayile zokubuyisa iifayile ezinenqanaba eliphezulu lokusebenza, le yeyona nto intle, akukho mathandabuzo. Ukusebenza kwayo kungaphezulu kwama-92%, ukuze phantse kungabikho fayile inje ngomfanekiso, ifoto kunye nevidiyo ebalekayo kwisikena sayo esinamandla.
Ungayijonga kwangaphambili imifanekiso kunye neefoto ezifunyanwa yile app, ukwenzela ukuba ungenzi mpazamo ngale mifanekiso ungafuniyo ukuyibuyisela kwaye, ngokuchaseneyo, kunye naleyo ufuna ukuyifumana kwakhona. Ungagcina okubuyiselweyo kwimemori yangaphakathi ye-smartphone okanye kwimemori yangaphandle ye-smartphone (ukuba kukho enye). Kwakhona, ixhasa iintlobo zeefayile ezinje ngeJPG, JPEG, GIF, PNG, MP4, 3GP, TIFF, BMP, kunye neTIF.
Kwelinye icala, inokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezi-5, umlinganiso weenkwenkwezi ezi-4 kwiVenkile yokudlala, kunye nezimvo ezininzi ezilungileyo kunye nokulinganisa okukufaneleyo njengenye yezonaapps zibalaseleyo kudidi lwazo. Ungathandabuzi ukuzama ukuba ubone ukuba isebenza njani.
Umthuthukisi: Ukubuyisa ifoto, Buyisa umfanekiso osusiweyo, 사진 복구
Isicelo sokubuyisela ifoto, ukubuyisela kwakhona
Into ekunokwenzeka ukuba uninzi lwezicelo zolu hlobo azinakukwenza kukufumana iifayile ezisusiweyo kwimemori khadi engaphandle yeselfowuni. Ewe, oku kuwela ngaphakathi kwezakhono zakho, kodwa kananjalo, njengoko unokulindela, kunjalo ukubuyiswa kweefayile kwimemori yangaphakathi yefowuni.
Iskena sefayile esisusiweyo sesi sicelo sisebenza ngokufanelekileyo kwaye siyakubonisa, kwisiphelo sendlela inkqubo yohlaziyo, yonke into onokuyifumana kwimemori khadi yakho (ayinamsebenzi ukuba uyifomathile) kunye nenkumbulo yangaphakathi yefowuni yakho ephathwayo ngokukhawuleza nangokulula . Inika iintlobo ezimbini zokujonga: zilula kwaye zinzulu. Ngokucacileyo, le yokugqibela yeyona ilungileyo ekufumaneni iifayile ezisuswe ngaphambili.
Ikwabonelela ngecandelo elilula apho ibonisa ulwazi malunga ne-smartphone ezinje ngenqanaba lebhetri, imemori yangaphakathi esetyenzisiweyo, indawo yokugcina yasimahla, ulwazi malunga nokusetyenziswa kwememori ye-RAM yeselfowuni kunye negama lemodeli yeselfowuni.
Ukubuyiselwa kwakhona kweScreen- iDiski enzulu eDischer
Olu lolunye udoti olugqwesileyo kunye nefayile yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ekhathalela zonke izinto oye wakwazi ukuzicima ngabom okanye ngempazamo kwaye ufuna ukubuyisa ewe okanye ewe ngaphandle kwengxaki ezinkulu. Ukubuyiselwa kwakhona kweScreen kwenza uvavanyo olupheleleyo olufumana phantse zonke iifayile ezinjengeefoto, imifanekiso kunye neevidiyo ozicimileyo ngaphambili, ngokulula, ngokukhawuleza nangokulula.
Nangona kunjalo, akuphelelanga apho; Ikwakulungiselelwe ukujongana neemeko ezininzi zokulahleka kwedatha kubandakanya nohlaziyo lwefowuni, inkqubo kunye nokunye.
Ngokubanzi, ukubuyiselwa kwefayile kukhawuleza kakhulu, kodwa isantya sayo sinokuchaphazeleka bubungakanani befayile, kufanelekile ukuba uyikhumbule. Ngendlela efanayo, sisixhobo esithembekileyo kunye nesibhetyebhetye, kunye nokuba yenye yezojongano zilungileyo.
Okokugqibela, sesinye sezicelo ezinenqanaba eliphezulu kuyo yonke iVenkile yokuDlala, eneenkwenkwezi ezi-4.8 kunye namakhulu amawaka okhuphelo.
Ukubuyiswa kweScreen sokuKhangela kwakhona- iDiski eDigger enzulu
Phinda ubuye ususe iiFoto
Ukuqhubeka nokongeza iifayile zokubuyisela iifayile kolu luhlu, kuza kuphila Iifoto ezicinyiweyo, isixhobo esikuvumela ukuba ubuyisele iifoto kunye nemifanekiso ngaphandle kobunzima kwaye ngokulula.
Ukuba sele usebenzise i-bin eyahlukeneyo kunye neefayile zokubuyisa iifayile kwaye khange zisebenze njengoko bekulindelwe, inokuhlangabezana nokulindelweyo, kuba iyakwazi ukufumana zonke iifoto ezisuswe ngempazamo okanye ngabom kwixa elidlulileyo.
Ukongeza, inokukhutshelwa okungaphezulu kwezigidi ezili-10, amanqaku amahle kakhulu e-4.0 kwaye yenye yezona zilula kakhulu zohlobo lwazo, kunye ubunzima obungafikeleli kwi-3 MB kwivenkile ye-Android Play. Isebenza kakhulu kwaye uninzi lwezimvo ezifumanayo ziyayixhasa.
Ukuphelisa oku kudityaniswa kunyawo lwasekunene, sikubonisa le vidiyo yokubuyisela usetyenziso, leyo unokunika ubomi obutsha kuzo zonke iividiyo ongasenazo, mhlawumbi ngenxa yokuba uzicime ngempazamo okanye uzicime ngabom.
Ngokusebenza okungama-92%, iskena sesicelo siya kufumana phantse zonke iividiyo obuzicimile ngaphambili. Kwaye ukuba ithamsanqa likuwe, uya kuba ne-100% kwiimeko ezininzi. Ke ukuba ufuna ukubuyisela kwakhona iividiyo, zama esi sixhobo, simahla kwaye asifuni ukufikelela kwengcambu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Isoftware ephezulu ye-8 yeNkunkuma kunye neFayile yokuBuyisa i-Android
Honor Band 6, uhlalutyo, iimpawu kunye nexabiso